DOWNLOAD Sukhoi Su-34 Ebu Flanker FS2004 - Rikoooo
downloads 22 441
The Sukhoi Su-34 (mbupụ designation: Su-32) bụ a Russian otu bombu kenkwucha na-emegide okpuru mmiri / mmiri ike.
N'afọ ndị 1970-1980, ndị Soviet kenkwucha otu bombu ike e-adịkwaghị na mig-27 na Su-24, ma tupu ndị iyi egwu jụrụ akpọ smart ngwá agha na nkenke, nke USSR kpebiri imeghari ka ọnọdụ na ike na Su-34 ( NATO code: Fullback). Ya Western counterpart bụ tonado IDS. (Wikipedia)
Mara mma n'èzí nlereanya (kere Gmax) na abụọ repaints, isi awọ na-acha anụnụ anụnụ. Virtual kokpiiti na 2D panel ugbu ezi mma, ọtọ gauges, mgbe burner mmetụta na engines ụda dị nnọọ ezi uche.
Onye edemede: Bowe Tyson